भारतमा जिएसटी लागू भएपछि के सस्तियो, के महँगियो ?
एजेन्सी, असार १७
भारतीय बजारको प्रभावले नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि प्रत्येक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। सीमा क्षेत्रका नेपालीहरुले कतिपय उपभोग्य सामान भारतीय बजारबाट ल्याउने हुँदा त्यहाँको असरमा नेपालीहरु पनि पर्ने गरेका छन्।
भारतमा गएरातिदेखि जिएसटी अर्थात गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स लागू भएको छ। भारतीय जिएसटी काउन्सिलले १२ सय भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको ट्याक्स दर तय गरेको छ। सो ट्याक्स लागू भएसँगै भारतीय बजारमा केही सामानहरु सस्तिएका छन् भने केही महँगो भएको छ।
अति आवश्यक उपभोग्य बस्तुहरु सस्तिएका छन् भने सुविधायुक्त र आधुनिक जीवनशैलीका सामानहरु महँगिएका छन्। दूध, मसला, खुला खाद्यान्न, नुन, फलफूल, तरकारी, गर्भनिरोधक साधन लगायत बस्तुमा शून्य प्रतिशत जिएसटी लागू भएको छ।
अर्थात यी बस्तुहरु भारतीय बजारमा पहिलेको तुलनामा निकै सस्तिएको छ। पहिलेका धेरै करहरु हटेपछि यी बस्तुहरु सस्तो भएको हो। भारतीय बजारमा यी बस्तुहरुको मूल्य १२ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
अन्य बस्तु तथा सेवामा श्रेणीअनुसार ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी लगाइएको छ। चिया, कफी, खाने तेल, ब्राण्डेड खाद्यान्न, एलपी ग्यास, काजू किसमिस, ५ सय रुपैयाँमुनिको जुत्ता, १ हजारमुनिको कपडा, तामा, फलामका भाँडा लगायतमा ५ प्रतिशत जिएसटी लगाइएको छ। यी बस्तुहरुको मूल्य पनि तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएको छ।
पहिलेका कर हटेका कारण तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्न गएको हो। त्यस्तै ड्राइ फूड्स, घ्यू, माछामासु, दूधबाट बनाइएका परिकार, स्टोभ, ट्याक्टर, साइकल, मोबाइल फोन, एलइडी बल्ब लगायत सामानमा १२ प्रतिशत ट्याक्स लगाइएको छ। यी सामानहरु पहिलेकै मूल्यको आसपास पर्न गएको छ।
त्यस्तै तयारी चिनी, कपालमा लगाउने तेल, साबुन, नोटबुक, सुप तथा आइसक्रिम, ट्वाइलेट पेपर, प्रिन्टर तथा कम्प्युटरमा १८ प्रतिशत ट्याक्स लगाइएको छ। यीमध्ये केही सामानहरु महँगो पर्न गएको र केही पहिलेकै मूल्यमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
२८ प्रतिशत ट्याक्स लगाइएका बस्तुहरुमा गाडी, मोटरसाइकल, चकलेट तथा बटर, पेट्रोल, डिजल, पान मसला, फ्रिज, परफ्यूम तथा मेकअपका सामान, तरल साबुन, टायर, वासिङ मेसिन, लगायत छन्। यी सामानमा २८ प्रतिशत ट्याक्स लागेकाले पहिलेका अप्रत्येक्ष कर हटेपनि महँगो पर्न गएको छ। यी बस्तुहरु जिएसटी लागू भएसँगै भारतीय बजारमा महँगो पर्न थालेको हो।
के हो जिएसटी ? कसरी मूल्यमा आयो फेरबदल ?
केन्द्र अर्थात राज्य सरकारले अन्य अप्रत्येक्ष करको बदलामा लगाएको बस्तु तथा सेवाको कर नै जिएसटी हो। जिएसटी लागू भएसँगै १७ भन्दा बढी अप्रत्येक्ष करबाट सर्वसाधारणलाई मुक्ति मिलेको छ। जसले गर्दा धेरै सामानको मूल्य सस्तो पर्न गएको छ।
एक्साइज, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्यको बिक्री कर, एक राज्यबाट अर्कोमा जाँदा लाग्ने इन्ट्री कर, बस्तुको ओसारपसार गरेवापतको जस्ता अप्रत्येक्ष कर अब भारतमा समाप्त भएको छ। ट्याक्सका कारण राज्यहरुमा पर्ने सामानको मूल्यान्तर घटेको छ। राज्यका फरक फरक करका दरहरु हटेका छन्।
त्यसको विकल्पमा एउटै जिएसटी कर ल्याइएको हो। जसले गर्दा पहिले लाग्दै आएको करमाथि अर्को करका कारण महँगो भएका सामानहरु सस्तिएका छन्। धेरै राज्यको बाटो हुँदै अर्को राज्यमा पुर्याउनुपर्ने सामान सस्तो भएको छ। तर २८ प्रतिशत जिएसटी लागेका बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य भने महँगो पर्न गएको छ।
जीवनलाई अपरिहार्य बस्तु तथा सेवा, वैकल्पिक बस्तु तथा सेवा र सुविधायुक्त बस्तु तथा सेवालाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरी सोहीअनुसारको कर निर्धारण गरिएको जिएसटी काउन्सिलले जनाएको छ। भारतको जम्बुकश्मिर बाहेक अन्यन्त्र यो गएरातिदेखि लागू भएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १७, २०७४, १२:२३:२८